မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: My Honeymoon No.1 - New Zealand Visa Application for Myanmar passport holder
Posted by mabaydar at 7:38 PM
စလုံးတွေ မလေးတွေ ကျတော့ working holiday ဗီဇာတွေ အလွယ်တကူရကြတယ် ။ တကယ်က ယပလက်မမို့သာ အဲလောက်အကြောတင်းတာ မဗေဒါရယ်... အသိညီမလေးတစ်ယောက်အတွက် ဗင်နီဇွဲလားဗီဇာလျှောက်ပေးတာ ဘာမှမလိုဘူးရယ် ဒါတောင် ညီမလေးက ၁၈ မပြည့်သေးဘူး ။ ခရီးသွားဖို့ မိဘခွင့်ပြုချက်ရယ် ၊ ခေါ်စာရယ် ၊ ဖောင်ရယ် ၊ လေယဉ်လက်မှတ်ဘွတ်ကင်ရယ်ပဲလိုတာ ။ စလုံးကအဖြူမတွေ သေသေချာချာလုပ်ပေးတယ် ။ အဓိကတော့ ယိုးဒယားမတွေက ကိုယ်တွေကိုဆို အထင်သေးတာရယ်.... မြန်မာဟေ့ဆိုရင် နှိမ်ချင်တာရယ်ကြောင့်ဖြစ်ရတာ ပြီးတော့သူတို့လူမျိူးတွေက ၀မ်းတွင်းပုတ်တွေ ။ အဖြူတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်လျှောက်ရတာ ပိုကောင်းသေးတယ် ။ လူကိုလူလိုပဲမြင်တယ် ။ ယိုးဒယားတွေလိုမဟုတ်ဘူး ။ ကိုယ်တွေအစိုးရကလည်း မုဆိုးမအစိုးရသာသာဆိုတော့ ဟိုကလည်းအားမနာ ဒီကလည်းအားမနာဘူးရယ်..။
5/26/2015 9:00 AM
အားရင် မြန်မြန်လေး ဆက်ရေးပါဝေ့..
5/26/2015 11:32 AM
အောင်မလေး ရင်မောလိုက်တာနော်။ ပတ်စပို့ အကြောင်းရေးထားတဲ့ဟာ ဖတ်ရတာ အားရတယ် ကျေနပ်တယ်။ ရှယ်ပီ ဖေ့ဘွတ်မှာ။
5/26/2015 4:15 PM
Kyaik twar par del!
You have suchagood memory to write all in details!
5/27/2015 11:49 AM
Great post ma baydar
@ဆုမြတ်မိုး - အစကတော့ အဲ့လိုပဲ ထင်တာပါပဲ။ ဟုတ်ရင်လဲဟုတ်မယ် မဟုတ်ရင်လဲ မဟုတ်ဘူး။ လက်ဆုတ်လက်ကိုင်မရှိတော့ မစွပ်စွဲချင်ပါဘူး။ ဖေ့ဘွတ်ပေ့ခ်ျမှာတော့ သွားဖူးတဲ့သူတွေလဲ ပြောတယ် INZ1200 form သူတို့လဲ ဖြည့်ရတယ်တဲ့။ ဓာတ်ပုံတွေတော့ မတောင်းဘူးတဲ့။ သူ wedding ပုံတွေ ကြည့်ချင်လို့ ထင်ပါ့။
@မဆွေလေးမွန် - ဟုတ်။ အားတိုင်းရေးနိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ ပူပူနွေးနွေး ပြန်လာတုန်းလေးမို့။ ၁၆ရက်ခရီးစဉ်ဆိုတော့ ဒီခရီးအကြောင်းက မနည်းဘူးရေးရမှာ။
@Yummm - comment ထားခဲ့တာရော ဖေ့ဘွတ်မှာရှယ်ပေးတာရောအတွက် ကျေးဇူးကမ္ဘာပါရှင်။ နောက်ပိုစ့်မှာလဲ ပြဿနာတွေထပ်ပါပြီး ရင်တွင်းဖြစ်တွေ ဆက်ဖတ်ရအုံးမှာမို့။ ကြိုက်တယ်ဆို ထပ်ရှယ်ပါအုံးနော်။ :D
@William - Are you William Tan? I only see like of William Tan. ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိ။
@Nint Gyi Daw - နာမည်ကတော့ ရှယ်ပဲနော်။ မှတ်ဥာဏ်နဲ့ မှတ်တာက ၂၀ရာနှုန်းလောက်ပဲရှိမယ်ထင်တယ်။ တချို့ရက်စွဲတွေ၊ အချိန်အတိအကျတွေ၊ ပိုက်ဆံတွေကျတော့ ကိုယ်ရေးမှတ်ထားသော်လည်းကောင်း၊ အီးမေလ်းထဲက အချိန်နဲ့ ရက်စွဲတွေ ပြန်ကြည့်သော်လည်းကောင်း ပြန်လုပ်ရတာပေါ့။ အားလုံးကို တသွေမတိမ်းမှတ်မိဖို့က မှတ်ဥာဏ်တစ်ခုတည်းတော့ မရဘူး။ ပိုစ့်ရေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကို မှတ်မှတ်ရရ တချို့ဟာတွေကို စာအုပ်ထဲရေးမှတ်ထားတာ။
@Anonymous - ကျေးဇူးပါ နောက်ပိုစ့်တွေလဲ လာဖတ်ပါအုံး။ မဗေဒါစဉ်းစားထားတယ် မဗေဒါရဲ့ New Zealand post တွေအောက်မှာ လာမန့်တဲ့သူတွေကို လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေ ကံစမ်းမဲဖောက်ပေးဖို့ အစီအစဉ်လေး။ အဲဒါကြောင့် နောက်တစ်ခါ မန့်ရင် နာမည်လေးရေးပြီး မန့်နော်။
5/27/2015 6:36 PM
Thank you for the reply to my comment! How long did it take you to write that post? Do you always note things down to write posts? For me, I cant even remember my feeling in details afterawhile.
@Nint Gyi Daw - For this post, it took me two days to write. Of course, I am not writing this two full days. Sometime still have to do my work and watch dramas too. I did not usually note things down to write posts before. But for this trip, I tried to practise that. Noting things down. Because human brain tends to forget things. But for those feeling I had while visitingaplace is my real feeling that I will not forget. You just go back to those time and you can feel it again and I write it down how I remember.
In my opinion, people hardly forget what they have experienced, aren't they?
5/28/2015 12:10 AM
Yes Ma Baydar...this is William Tan...I can't believe what they asked! As if you arearefuge!
5/28/2015 8:39 AM
Wow you areavery efficient writer! Unfortunately I am one of those who forget all their feelings. Looking forward to your next post naw!
5/28/2015 7:39 PM
Than Myat Soe said...
5/28/2015 9:57 PM
@Nint Gyi Daw - Thank you. I have already posted next post about our Day 1 trip. Have you read it? Let me know after you read it.
@Than Myat Soe - မြန်မာဖြစ်လို့နှိမ်ခံရတာထက် မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်နေလို့ ခုလို စစ်ဆေးမေးမြန်းခံရတာဆို ပိုမှန်မယ်။ မြန်မာပေမဲ့ အမေကန်နိုင်ငံသားဖြစ်နေရင်၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံသားဖြစ်နေရင် ဒီလို ဘယ်ဆက်ဆံခံရမလဲ။ ဒီတော့ နိုင်ငံက ကမ္ဘာအလည်မှာ အဆင့်မမှီ ဂုဏ်မရှိတာက အဓိကဖြစ်နေတယ်ထင်တာပဲ။
မဗေဒါေ၇ ဗီဇာလျှောက်တာဖတ်ပြီးမောသွားတာပဲ။ ဟုတ်ပါ့တစ်ခုခုသွားလည်ချင်တိုင်း ကိုယ်တွေပဲလျှောက်ဖို.လို.တာ တွေးမိတိုင်းစိတ်တိုရတယ်
6/03/2015 12:09 AM